E- Live Nepal – Page2– News Collection of Nepal
फाल्गुन २६, २०७४ – सिमा बस्नेत आज दलितको बारेमा लेख्न मन लाग्यो । कसले कस्ले बनायो मान्छेलाई दलित ? को हो दलित ? किन हेपिन्छ दलितलाई ? सानो जाती, दलित जातीको अस्तित्व ,पहिचान त प्राचीन शास्त्रीहरुले राखेर गए । यसमा कसको के दोष छ र ? कामको आधारमा मान्छेको पहिचान सानो जातीले गर्नुपर्ने भनेर बाड्फाड […]
ललितपुर : केही समयअघिसम्म ललितपुर महानगरपालिकाका बासिन्दा नायचा महर्जन आफ्नै जग्गाछेउबाट फास्ट ट्र्याक जाने खुसीमा थिए। तर, जब सेनाले खन्न लागेको फास्ट ट्र्याकमा आफ्नो जग्गा पर्ने भयो, तब उनको निद्रासमेत लुटिएको छ। जग्गाको भाउ सुनजस्तै महँगिँदै जाँदा उनले भने आफ्नो झन्डै ६ रोपनी जग्गा कौडीको भाउमा दिनुपर्ने अवस्था आएपछि उनको खुसी र निद्रा लुटिएको हो। […]
अब अवकाशप्राप्त सैनिकलाई थप भत्ता दिइने…..(पुरा बिवरण हेर्नुहोस्)
काठमाडौँ । नेपाली सेनाले सय वर्ष पुगेका अवकाशप्राप्त सैनिकलाई मासिक १० हजार रुपैयाँ थप भत्ता उपलब्ध गराउने भएको छ। प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीले पूर्वी पृतनामा शुक्रबार आयोजित भूतपूर्व सैनिक सम्मेलनमा ९० वर्ष कटेकालाई ३ हजार र सय वर्ष पुगेकालाई १० हजार थप मासिक भत्ता दिने घोषणा गरेका हुन्। सेनाको ‘कमान्ड मार्गनिर्देशन–२०७२’ अनुसार कल्याणकारी कोषबाट व्यहोर्ने गरी […]
काठमाडौं, २५ फागुन । बिहीबार देशभर धुमधामसँग अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाइरहेका थिए । पुरुषहरुले पनि महिलालाई समान व्यवहार गर्ने मात्र होइन, महिला हिंसाविरुद्ध हातमा हात मिलाएर लड्ने प्रतिवद्धता जनाए । तर, कैलालीको घोडाघाडी नगरपालिका-५ देउकलीमा भने २० वर्षीया एक युवती भने लगातार ६ घन्टासम्म कुटपिटमा परिन् । आफूलाई भोले बाबा बताउनले ताण्डव नृत्य देखाइरहँदा सिंगो […]